| १६ आश्विन २०७२, शनिबार १०:५८ , प्रकाशीत
आश्विन १६, २०७२- आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) थप संकटमा परेको छ । खेलाडी, प्रशिक्षकदेखि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको दबाब झेलिरहेको क्यानलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
राखेपले शुक्रबार क्यानलाई ५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न १५ बुँदे माग गरेको छ । राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टका प्रेस सल्लाहकार रोहित दाहालले क्यानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पुष्टि गरे । सोहीअनुरूपको जवाफ नआएमा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ र खेलकुद विकास नियम २०४९ बमोजिम कारबाही गरिने निर्णय शुक्रबार परिषदको सदस्य सचिवस्तरीय बैठकले गरेको छ ।
दुई दिनअघिमात्र राखेप सदस्य सचिव विष्टले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई भेटी उनीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । त्यसपछि एक हप्ताभित्र क्यानको विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकिने भन्दै नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च संस्थामा कारबाहीको संकेत गरेका थिए । अर्को महिना चुनावमा जाने तयारीमा रहेको क्यानविरुद्ध राखेपले पुनर्गठनको हिसाबमा लिखित स्पष्टीकरण सोधेको राष्ट्रिय खेलकुदको सर्वोच्च निकाय स्रोतको दाबी छ ।
खेलकुद मन्त्रालयले गत वर्ष नै वर्तमान क्यानलाई निलम्बन गर्दै विनयराज पाण्डेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय नयाँ कमिटी बनाएको थियो । तर त्यो नयाँ कमिटीलाई तत्कालीन राखेपको समर्थन थिएन र सदस्य सचिव युवराज लामाले खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने भन्दै पुरानै क्यानलाई काखी च्यापेका थिए । विवाद न्यायालयमा पुग्दा सर्वोच्च अदालतले पुरानो क्यानलाई स्टे अर्डर दिएपछि नयाँ क्यानको अस्तित्व हराएर गएको थियो ।
तर लामा सदस्य सचिव कार्यकाल सकाएर गएसँगै राखेपको नयाँ नेतृत्वले वर्तमान क्यानमाथि दबाब दिन सुरु गरेको थियो । त्यसैमा शुक्रबार १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । राखेपले वर्तमान क्यानमा संघ चलाउने कुनै हैसियत नभएको भन्दै एउटा सोधिएको बुँदामा भनेको छ, ‘आईसीसी र एसीसीले टिम व्यवस्थापकको हकमा अंग्रेजी बोल्न जान्ने र मिडियासँग राम्रो कुरा गर्न सक्ने हैसियतको व्यक्तिलाई मात्र टिम म्यानेजर बनाउन भने पनि अध्यक्ष र महासचिव आफैं किन टिम म्यानेजरको हैसियतले भ्रमण गरेको हो ?’
दीपक कोइराला क्यान इतिहासमै पहिलो अध्यक्षका रूपमा आयरल्यान्डमा भएको विश्व ट्वान्टी–२० छनोटमा नेपाली टिमको व्यवस्थापक भएर गएका थिए । त्यसअघि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को निमन्त्रणामा नेपालले धर्मशालामा गएर त्यसको तयारी गरेको थियो । सो भ्रमणमा क्यान महासचिव उत्तम कर्माचार्य पनि टिमसँगै गएकामा राखेपले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसीसी) ले प्रदान गर्ने निर्णय गरेको एसिया कप ग्रान्ट ल्याउन नसकेको कारण के हो भनेर राखेपले क्यानसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । ‘एसीसीद्वारा पहिले फ्रिज गरेको लगभग ४ करोड ७४ लाख ग्रान्टअन्तर्गतको बजेट भूकम्पपश्चात गरिएको अपिलपछि ससर्त फुकुवा भएको र क्यानलाई दिने निर्णय एसीसी बोर्ड बैठकले गरेको नै बुझियो । एसीसीले उक्त रकम क्यानका सीईओसमेत रहने गरी छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने, मूलपानीको माथिल्लो मैदानको विस्तृत लागत पठाउनुपर्ने र कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा लाग्ने सरकारले छुट्याएकोबाहेक खर्च पठाउन बारम्बार तागेता गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको जस्ता लापरबाहीले फेरि पनि उक्त रकम फ्रिज भए त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’
एसीसी र आईसीसीले नेपाललाई दिंदै आएको सहयोग रोकेको झन्डै १० महिना भएको छ । त्यसमा राखेपले स्पष्टीकरणमा भनेको छ, ‘क्यानले आईसीसीमार्फत पाउनुपर्ने लगभग ६ करोडभन्दा बढी रकम भए पनि हालसम्म नपाएको जानकारी पाइयो । बारम्बार आईसीसीको निर्देशनलाई क्यानले लत्याउँदै आएको भेटियो र फेरि पनि क्यानलाई आईसीसीले कारबाही गर्दा धेरै ठूलो रकम गुमाउनुपर्ने सम्भावना देखिन्छ । यस स्थितिको जिम्मा कसले लिने हो ?’
समयमा आर्थिक प्रतिवेदन नबुझाएको भनेर आईसीसीले नेपाललाई २ वर्ष अगाडि १ लाख डलर जरिवाना लगाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा सम्पूर्ण रूपमा क्यान दोषी रहेको भन्दै संघका सबै पदाधिकारीबाट उक्त रकम असुल्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश किन पालना नगरेको भनेर पनि राखेपले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
स्पष्टीकरणमा क्यानले आईसीसी र एसीसीको सबै निर्देशन लत्याएको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रिय टिमका लागि एसीसी र आईसीसीले बारम्बार टिम व्यवस्थापक, शारीरिक फिट्नेस प्रशिक्षकलाई लामो समय अनुबन्धनमा राख्न भनिए पनि उक्त आदेशलाई हालसम्म पनि कुनै जवाफ नपठाई बेवास्ता गरेको र सुधार्ने प्रयाससमेत किन नगरिएको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेले राम्रो गरेकोमा उनको सम्झौता ६ महिनामात्र किन करार अवधि थपेको, आईसीसीलाई र एसीसीलाई मौखिक एवं लिखित रूपमा धेरै पटक उनको करार अवधि लामो समयका लागि थप्ने भनी क्यानले प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म पनि उनलाई किन कुनै आधिकारिक करार पत्र नदिइएको, प्रशिक्षक पुबुदु दसानायकेको करार सम्झौता बुझाउन किन ढिला गरेको ? भन्दै राखेपले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
क्यानको नेतृत्व क्षमता नहुँदा नेपालले लगातार २ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने मौका गुमाइसकेको छ । तर आईसीसीको बोर्ड बैठकले नै पारित गरेको नेपाललाई यू–१९ विश्वकप छनोट ससर्त आयोजना गर्न दिंदा पनि काठमाडौंबाट सरेको त्यो प्रतियोगिता अर्को महिना मलेसियाले आयोजना गर्दैछ । त्यस्तै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्दा नोभेम्बर २८ र ३० मा पपुवा न्युगिनीविरुद्ध हुने विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको खेल यूएई सारिएकामा पनि राखेपले क्यानको कमजोरी औंल्याएको छ ।
पदाधिकारीलगायत कर्मचारीबाट क्यानले लिनुपर्ने बेरुजु रकम १ करोड ७३ लाख उठाउन कुनै कदम नचालेको आरोप राखेपको छ । क्यानले मैदान प्रयोग गरेबापत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बक्यौता नबुझाएको, त्यहाँ लामो समयदेखि काटिएको बिजुलीको लाइनका कारण हाल पुनर्निर्माण कार्यलाई पनि अवरोध गरेकाले राखेपले स्पष्टीकरण सोधेको छ । एसीसी यू–१६ प्रिमियर विजेता टिमलाई दिने भनिएको छात्रवृत्ति अहिलेसम्म किन नदिएको ? भनेर प्रश्न सोधेको छ
क्यानभित्र देखिएको चरम विवादका कारण केही वर्षअघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च बनाउन योगदान गर्दै आइरहेको क्रिकेट खेलको नतिजा अहिले खस्कँदो अवस्थामा पुगेको राखेपको ठहर छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा क्यान विघटन र पुनर्गठनसम्मको सजाय तोक्ने हक रहेको दाबी राखेपको छ ।
राखेपले मागेको स्पष्टीकरण
एसिया कप ग्रान्टबाट आउन लागेको रकम ल्याउन पहल नगरेको
एसीसी र आईसीसीले बारम्बार टिम व्यवस्थापक, फिट्नेस प्रशिक्षकलाईलामो समय अनुबन्धमा राख्न भनिए पनि उक्त आदेशलाई हालसम्म पनि कुनै जवाफ नपठाई बेवास्ता गरेको
आईसीसी बोर्ड बैठकले नै आईसीसी यू–१९ ग्लोबल क्वालिफायर जस्तो ठूलो प्रतियोगिता क्यानलाई ससर्त गर्न दिने निर्णय गर्दा पनि बेवास्ता गरेको
वित्तीय व्यवस्थापनमा क्यानले खाता कसरी र कुन नियन्त्रण प्रक्रियाअनुरूप सञ्चालन गरिरहेको
करिब १ करोड ७३ लाखभन्दा बढी रकम क्यानले लिनुपर्ने बेरुजु हिसाब देखिएको छ, हिनामिना भएको उक्त रकम उठाउनेतर्फ बोर्डले कुनै कारबाही अघि नबढाएको
आईसीसीमार्फत पाउनुपर्ने लगभग ६ करोडभन्दा बढी रकम भए पनि हालसम्म क्यानले नपाएको जानकारी पाइयो
क्यानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाएको